လူယုံကြည်မှုရနိုင်စေသည့် ကိုယ်အမူအယာ (၅) မျိုး [ Zawgyi ] ဤ ကိုယ်ဟန်အမူအရာ မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲနှင့် စကားပြောနည်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်ငါးချက်နှင့် လူတို့၏ယုံကြည်မှု ကို ရယူလိုက်ပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ဖြစ်စေ၊ တသီးပုဂ္ဂလဆက်ဆံရေးများတွင်ဖြစ်စေ၊… Discussion လူယုံကြည်မှုရနိုင်စေသည့် ကိုယ်အမူအယာ (၅) မျိုး 25 Likes နာမ်စားများကို ကျား/မ ဘက်မလိုက်စေရန်ရေးနည်း… [Zawgyi] သင်ရေးသားထားတဲ့ ၀ါကျထဲက ကတ္တား (subject) ရဲ့ Gender ဟာ အထီး (male) မဟုတ်ဘူးဆိုရင် he (သို့) him ဆိုတဲ့ ခေတ်မမီတော့တဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ဘယ်လိုရှောင်ရေးပါသလဲ? ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ကျား/မ ဘက်မလိုက်ပ… Discussion နာမ်စားများကို ကျား/မ ဘက်မလိုက်စေရန်ရေးနည်း… 31 Likes သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုန… (၄) ERRONEOUS အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ။ မှားယွင်းသော၊ မမှန်ကန်သော။ အစားထိုးနိုင်သော စကားလုံး - wrong (မှားယွင်းသော) Erroneous ဟူသော စကားလုံးသည် မှတ်မိရန် လွယ်ကူသော စကား လုံးတစ်လုံးပင်ဖြစ်ပါသည်။ အ… Discussion သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုန… 10 Likes သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုန… ကျောင်းနေစဉ်ကာလတစ်လျှောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျောင်း၏ အိမ်စာတာဝန်များ ရေးသားလာခဲ့ပြီးနောက်တွင် သင်၏ စာစီစာကုံးများတွင် စကားလုံးသုံးရန် ရွေးချယ်သောအခါ သုံးဖူးပြီးစကားလုံးများကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်သုံးမိခြ… Discussion သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုန… 29 Likes
ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုသင့်သော ထူးကဲသည့် ဗြိတိ… 16. Bollocks ကမ္ဘာနှင့်အ၀ှမ်း လူသိများသော ဗြိတိသျှ ဗန်းစကားများထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Bollocks ရဲ့ အသုံးပြုပုံတွေက များပြားပါသည်။ ထိပ်ဆုံး အသုံးပြုပုံတွေထဲက တစ်ခုကတော့ "တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကို ဖော်ပြသော… Discussion ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုသင့်သော ထူးကဲသည့် ဗြိတိ… 13 Likes J@M - Episode4- An Interview * Click on the picture to seealarger image. ပုံကြီးကြည့်လိုပါက အထက်ပုံပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။ Jam: The Web Design Company that Teaches You English 3. လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်း (An Interview) Sanjeev တစ… Discussion J@M - Episode4- An Interview 34 Likes J@M - Episode2- Applying forajob * Click on the picture to seealarger image. ပုံကြီးကြည့်လိုပါက အထက်ပုံပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။ Jam - The Web Design Company That Teaches You English 2. အလုပ်လျှောက်ထားခြင်း (Applying forajob) … Discussion J@M - Episode2- Applying forajob 75 Likes J@M - Episode 1 - Saying what you are doing * Click on the picture to seealarger image. ပုံကြီးကြည့်လိုပါကအထက်ပုံပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။ Jam - The Web Design Company That Teaches You English 1. Saying what you are doing (လောလောဆယ် ကိုယ်ဘာလု… Discussion J@M - Episode 1 - Saying what you are doing 320 Likes အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည့် စကားလုံးများ ဘန်းစကားများ တည်ရှိနေရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းအရင်းများအနက် တစ်ခုမှာ အတွင်းလူများအချင်းချင်း ပြောဆို နေကြသည်ကို အပြင်လူများက နားမလည်စေနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ စကားလုံး အသစ်များထွင်ခြင်းသည် ၎င်းအချက်ကို ရရှိ… Discussion အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည့် စကားလုံးများ 20 Likes နဂိုအဓိပ္ပါယ်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသော စကားလုံးမ… အချို့သော စကားလုံးများသည် သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ အဆိုးဆုံးရန်သူများပင်ဖြစ် ကြသည်။ သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး သူတို့၏ ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများလည်း ဖြစ်နေကြပါသည်။ ၎င်းတို့အား contronyns (အဓိပ္ပါယ် ဆန့်ကျင်သောစကားလုံးမျ… Discussion နဂိုအဓိပ္ပါယ်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသော စကားလုံးမ… 16 Likes ယဉ်ကျေးညင်သာအင်္ဂလိပ်စာ - အပိုင်း (၁) [Zawgyi] စားသုံးသူတွေ ပြည့်ကျပ်နေပြီး ရောင်းအားကောင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆို်င်မှာ သင်က စားသောက်စရာတစ်ချို့ မှာလိုက်တယ်။ တော်တော်လေး ကြာတဲ့အထိ သင်မှာထားတာတွေက သင့်ဝိုင်းကို ရောက်မလာသေးဘူး။ ဘေးက ဝိုင… Discussion ယဉ်ကျေးညင်သာအင်္ဂလိပ်စာ - အပိုင်း (၁) 56 Likes စံပြ ဆက်ဆံပြောဆိုကောင်းသူများ၏ အလုပ်ခွင်သုံး… သင်ဟာ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို ကျွမ်းကျင်တယ်၊ ပြဿနာ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းတတ်တယ်။ လုပ်ငန်းတွေအချိန်မှီ ပြီးဆုံးအောင် လုပ်ကိုင်တတ်တယ်ဆိုရင် လုံလောက်ပြီလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ NACE လို့ ခေါ်တဲ့… Discussion စံပြ ဆက်ဆံပြောဆိုကောင်းသူများ၏ အလုပ်ခွင်သုံး… 26 Likes သင့်တော်သည့် စကားလုံးကို ရှာဖွေရန်အတွက် အကြံ… Finding the right word - le mot juste - wasalifelong quest for French novelist Gustave Flaubert: သင့်တော်သည့် စကားလုံး (ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်ဆိုလျှင် le mot juste) ကို ရှာဖွေခြင်းသည် ပြင်သစ်ဝတ္ထုရေးဆရာ G… Discussion သင့်တော်သည့် စကားလုံးကို ရှာဖွေရန်အတွက် အကြံ… 11 Likes Can I …… နှင့် May I……အား သင့်လျှော်စွာ သုံး… အောက်ပါ ဝါကျနှစ်ကြောင်းထဲတွင် မည်သည့် ဝါကျသည် ပိုမိုမှန်ကန်ပါသနည်း။ May I bring my sister too? (ကျွန်ုပ်၏ ညီမလေးပါ ခေါ်လာခွင့်ရမလား။) Can I bring my sister too? (ကျွန်ုပ်၏ ညီမလေးပါ ခေါ်လာနိုင်သလား။)… Discussion Can I …… နှင့် May I……အား သင့်လျှော်စွာ သုံး… 33 Likes လက်တွေ့အသုံးချအင်္ဂလိပ်စာ - သင်၏အလုပ်အကိုင်သစ်… Practical English Introductions - Tips for Your New Job (လက်တွေ့အသုံးချအင်္ဂလိပ်စာ - သင်၏အလုပ်အကိုင်သစ်အတွက်အသုံးကျမည့်နည်းလမ်းများ) Read the Passage Tips for your new job People always remember fi… Discussion လက်တွေ့အသုံးချအင်္ဂလိပ်စာ - သင်၏အလုပ်အကိုင်သစ်… 79 Likes လူတော်များပင် ကျုးလွန်မိတတ်တဲ့ စကားလုံး အသုံ… ယခင်အပိုင်းမှအဆက် ၁၁။ DISINTERESTED/ UNINTERESTED အချို့သောသူတွေက uninterested လို့ သုံးရမယ့် နေရာမှာ disinterested ကို မှားယွင်း သုံးစွဲတတ်ကြပါတယ်။ uninterested ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတော့တာ၊ ပျင်… Discussion လူတော်များပင် ကျုးလွန်မိတတ်တဲ့ စကားလုံး အသုံ… 24 Likes လူတော်များပင် ကျုးလွန်မိတတ်တဲ့ စကားလုံး အသုံ… အင်္ဂလိပ်စကားလုံး ဝေါဟာရတွေကို အသုံးပြုတဲ့ နေရာမှာ သတိမပြုမိဘဲ အသုံးအနှုန်းကို လွဲမှားစွာ သုံးမိတတ်စေတဲ့ အချိန်အခါ၊ အခြေအနေမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့စကားလုံးတွေဟာဆုိရင် အမှားကိုပင် အမှန်ထင်ကာ သုံးေ… Discussion လူတော်များပင် ကျုးလွန်မိတတ်တဲ့ စကားလုံး အသုံ… 30 Likes အအောင်မြင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ နံနက်ခင်းကျင့်စဥ… [Zawgyi] တစ်နေ့တာသည် နံနက်ခင်းဖြင့် အစပြုပြီး သင့်နံနက်ခင်းကို သင် ဘယ်လောက်အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ခြင်းသည် သင်၏ တစ်နေ့တာကို ဘယ်လောက်အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်မည်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးပါသည်။ အောင်မြင်သူမျ… Discussion အအောင်မြင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ နံနက်ခင်းကျင့်စဥ… 63 Likes သေးငယ်လွန်းတဲ့ ပမာဏတွေကို ဖော်ပြတဲ့ စကားလုံး… မြန်မာစကားမှာ သေးငယ်လှတဲ့ ပမာဏတွေကို ဖော်ပြတဲ့ စကားလုံးတွေ စကားစုတွေ - ဥပမာ “ပမွှား၊ ပါးပါးလေး၊ မဆိုစလောက်” စတာတွေ ရှိသလို အင်္ဂလိပ်စကားမှာလည်း အလားတူသုံးတဲ့ စကားလုံးတွေ ရှိပါတယ်။ ဘာသာစကားဟာ သင်္ချာဘာသာ မ… Discussion သေးငယ်လွန်းတဲ့ ပမာဏတွေကို ဖော်ပြတဲ့ စကားလုံး… 31 Likes အလုပ်ခန့်အပ်သူများက အလုပ်ရည်ညွန်းထောက်ခံချက်… [Zawgyi]ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသည့် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တစ်စောင်နှင့် အင်တာဗျူးနည်းနာတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိပါက အလုပ်လျှောက် ထားသူတစ်ဦးသည် လစ်လပ်သောနေရာအတွက် လျာထားခြင်းခံရကောင်းခံရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အောင်မြင်ေ… Discussion အလုပ်ခန့်အပ်သူများက အလုပ်ရည်ညွန်းထောက်ခံချက်… 15 Likes Wordster, wordmonger အပါအ၀င် word နှင့်စသော… ဒီသင်ခန်းစာကို မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကြိုးစားထဲက word ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ထပ်ကာ ထပ်ကာ မသုံးမိအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာကတော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ လျှာတောင်ခလုပ်တိုက်မိ လောက်အောင်ပင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်… Discussion Wordster, wordmonger အပါအ၀င် word နှင့်စသော… 16 Likes